Ma taqaanaa sida loo helo dib u bilaash ah ganacsiga yaryar SEO?
Haa, waan aqaan sida loo helo dib u bilaash ah mashaariicda yar yar ee mashaariicda internetka, maadaama aan waayo-aragnimo u leeyahay la shaqeynta wakaaladaha SEO-ga, iyo sidoo kale ololaha macaamiisha ee bartilmaameedka ah ee SEO. Waxaan aaminsanahay in laga reebo fikirka SEO-ga laftiisa, caqabadda ugu weyn ee halkan ka taagan ayaa ah dhisidda xidhiidhada White-Hat ee ganacsiyada miisaaniyadda, xataa xitaa mid adag. Waxaan mar walba naxdin ku yeeshay inta websaydhiyaal ah iyo kuwa aan xirfad laheyn, gaar ahaan heerarka degaanka, sii wado sharafyada PBNs (Xogta Blog-ga gaarka ah) ama xitaa isku xirayaasha iibiya mararka qaarkood xitaa si cad u sheegaan inay heleen HQ iyo boggooda sare ee PageRank . Looma baahna in la sheego in "macaamiishooda" ay ciyaarayaan halis qatar ah oo khatar ah - marka ugu dambeysa, waxay u horseedi kartaa inay si toos ah u galaan ganaax culus Google. Mararka qaarkood ganaaxa noocan oo kale ah ayaa noqon kara xitaa aan dib looma noqon karin, ma aha in la yiraahdo si adag loo soo kaban karo. Sidaas awgeed, aynu wajahno - waa inaad taqaanaa sida loo helo dib u bilaash ah iyadoo la adeegsanayo hababka White-Kath ee dhismaha xiriirka ee SEO. Haddii kale, waxaad sidoo kale laga yaabaa inaad boggaaga internetka ama barta internetka gebi ahaanba laga saaro raadinta Google, halkii aad ka heli lahayd wax kasta oo la qiyaasi karo oo leh jagooyinka sare. Oo aynu ugu dambeyntii dib ugu soo noqnoqoneyno - hoosta ayaan kugula talin doonaa sidii aad u heli lahayd backlinks bilaash ah adoo isticmaalaya saddex taatiko oo khaas ah oo loogu talagalay ganacsiga yaryar. Dabcan, way adag tahay in la dhiso xarumo tayo sare leh oo si dabiici ah u shaqeeya, gaar ahaan marka ay adag tahay (haddii aanay lahayn eber) miisaaniyadda. Laakiin hawshu wali waa mid si toos ah loo maareeyn karo marka la qabanayo.
Mowjadaha Deegaanka iyo Hantida Ganacsiga
Maxay tahay inaad bilowdid magacyada maxalliga ah iyo hagayaal ganacsi, marka hore iyo ugu horreyn? Sababtoo ah noocyada dhabarka ah ee dib-u-qabashada waa fursad weyn oo ay ku bilaabi karaan. Xasuuso, badi goobaha maxalliga ah iyo mashaariicda ganacsiga ee internetka ma laha dad badan ama ma jiraan wax dib u celin ah..Waxyaabaha kale - Magacyada maxalliga ah, hagayaal, iyo liiska ganacsiga ayaa ah waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo si loo dhiso meel muuqaal ah oo muujinaysa isbedelka ganacsi kasta oo cusub, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya heerka degaanka. Halkan waxaa ah sida loo helo dib u bilaash lacag la'aan ah - si fudud u soo qaado qalab raadiye aalad maxaliga ah, iskudar falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan faahfaahinta ganacsiga oo ku saabsan xogta guud ee guud, u gudub habraaca cabirka kasta ee culeeys, liistada ama buuga loo baahan yahay - oo aad tahay la sameeyo.
Tilmaame: dadka kale, waxaan kugula talin lahaa in aad isku deyeysid Whitingpark si ay kaaga caawiyaan inaad hesho fursadaha saxda ah ee la tixgelinayo meesha aad ku nooshahay iyo weedha muhiimka ah ee muhiimka ah.
Horudhacii ugu sarreeyey ama Ururada Local Blogger Outreach
Iyadoo la tixgelinayo in mawduucyada maalgalinta ay badanaa ka baxaan su'aal (gaar ahaan suuqyada sida dhaqaalaha, arrimaha sharciga, suuqgeynta , iwm.), isbeddelka boostada martida ayaa noqon doona mid aan fiicnayn oo kaliya in la qabsado qaar ka mid ah tayada tayada dheeraadka ah, laakiin waa inaad wadaagto aqoontaada si aad ufilan ufilan wax u qabashada dadka dhagaystayaasha ah, iyo in la bilaabo dhisidda awoodaada xoogga leh iyo kalsoonida isticmaalaha wakhtiga. Dhibcoodka posts post sponsored - Waxaan kugula talinaynaa hubaalkan dhabta ah ee Gray-Hat sababtoo ah bixinta backlink leh boostada sponsored post aad weli ku ciyaareyso kulan halis ah sida haddii aad dhab ahaan iibsatay links paid.
Tilmaam: marka wax kasta oo kale u muuqdaan in ay ku fashilmeen, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad marto martida. Haa, waa wax aad u wakhti badan oo qaadaya oo u baahan doona inaad yeelato xirfad gaar ah oo lagu qoro maqaallo wanaagsan. Laakiin markaan tixgelineyno miisaaniyad adag oo ka mid ah xilliga bilawga bilowga ah, martida martida ah ee ilo kale oo khuseeya waxay noqon kartaa xal aad u fiican si aad u hesho dhismaha xiriirka kickstart ee ganacsiga yar yar. Kaliya iska hubi inaad buuxisey shuruudaha iyo shuruudaha heshiiska horey loo sii wadi karo, oo si joogta ah ugu shaqeynaya qoraal gaar ah oo qiimo gooni ah leh - oo ay leeyihiin qaar ka mid ah jilicsanaanta tayo sare leh Source .